Ny Fanekem-pinoana NISEANA - Fampianarana FLM Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Nampidirina tao anaty Litorjian’ny Fiangonana ny Fanekena Niseana, izay tsy vaovao raha ny maha-Loterana ny FLM.
“Ny FLM dia mino sy manaiky ary mampianatra fa ny Soratra Masina ahitàna ny Boky Kanonika ao amin’ ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, dia ny Baiboly, no Tenin’Andriamanitra. Izany Soratra Masina izany no hany fototra iorenan’ny finoany sy ny fampianarany ary ny fiainany sy ny asany.
Ny FLM dia mandray ny Boky Symbolika sy ny Konfesionan’ny Fiangonana Loterana ho filazàna fohy ny vontoatin’ny Soratra Masina. Ireto avy izany :
Ny Foto-pinoana eken’ny Fiangonana Kristiana eran-tany (Symboles Oucuméniques), dia ny Fanekem-pinoana Apostolika sy Niseana ary Atanaziana.
Ny Konfesiona tany Aogsborga, edisiona voalohany taona 1530 (Confessio Augustina Invariata) sy ny Fotopianarana kely nosoratan’i Dr Martin Luther.
Tsy azo ovàna ny Foto-pinoana voalaza amin’ity Fizaràna voalohany, Toko voalohany, Andininy faha-2 ity”.
Izay no voasoratra ao amin’ny Lalàm-panorenana pejy 7, Fizaràna I, Toko I, and.2, edisiona 2013.
Indro ary atolotra antsika ny fanekem-pinoana Niseana, izay efa fanao teto amin’ny Fiangonantsika ihany nanomboka tamin’ny nitondran’ny Pastora RASETA:
Izaho mino an’Andriamanitra Tokana, Ray tsitoha, Mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita.
Izaho mino an’i Jesosy Kristy Tompo Tokana, Zanak’Andriamanitra Lahitokana; nateraky ny Ray talohan’ ny fotoana rehetra; Andriamanitra avy amin’Andriamanitra; fahazavana avy amin’ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin’Andriamanitra marina; nateraka fa tsy noharina; miray Sobstansa (izay maha-Izy Azy) amin’ny Ray; amin’ ny alalany no nahariana ny zavatra rehetra. Noho isika olombelona sy ny famonjena antsika no nidinany avy any an-danitra, ary tonga nofo notorontoronin’ny Fanahy Masina tao an-kibon’ i Maria virijina ka natao olombelona; nohomboana tamin’ny hazo fijaliana koa hisolo antsika fony nanapaka Pontio Pilato; nijaly ary nalevina; ary nitsangana indray tamin’ny andro fahatelo araka ny Soratra Masina; niakatra ho any an-danitra; mipetraka eo ankavanan’ny Ray, ary ho avy indray amim-boninahitra hitsara ny velona sy ny maty, ary tsy hanam-pahataperana ny fanjakany.
Izaho mino ny Fanahy Masina, Izay Tompo sady Mpamelona; Izay avy amin’ny Ray sy ny Zanaka;Izay itsaohana sy omem-boninahitra miaraka amin’ny Ray sy ny Zanaka; Izay niteny tamin’ny alàlan’ny mpaminany; sady mino koa ny Fiangonana tokana, masina, apostolika, manerana izao tontolo izao. Izaho manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, ary miandry ny fitsanganan’ny maty sy ny fiainana mandrakizay.
Amafisin’ny Fampianarana ataon’i Pastora RANDRIANARIVELO Joseph, Mpitondra Fitandremana Montréal moa izany, mamaly ireto fanontaniana ireto:
1- Inona no antom-pisian’ny Fanekem-pinoana NISEANA?
2- Inona no tsy ampy na tsy nazava tao amin’ny Fanekem-Pinoana Apostolika?
3- Inona no maha samy hafa azy? Inona no itoviany?
Manasa antsika ary hanaraka izany, ary misaotra ny Pastora amin’ny fampianarany.